အလင်းရောင်ကြယ်များ: October 2014
ဧရာဝတီ| October 6, 2014 | Hits:1
ထိုင်းနိုင်ငံ စူရက်ဌာနီ ခရိုင်အတွင်းရှိ လိပ်ကျွန်းခေါ် ( Koh Tao ကျွန်းမှာ ) ဗြိတိန်နိုင်ငံသား စုံတွဲ အသတ်ခံ ရမှုနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ သတင်းဟာ ကမ္ဘာကျော် သတင်းတပုဒ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ထိုင်းရဲတွေက မြန်မာ နိုင်ငံသား ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်လေးနှစ်ဦးကို လူသတ်တရားခံအဖြစ် ထုတ်ပြန် လိုက်တဲ့ အပေါ် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သာမကဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံသား အများစု ကပါ ထိုင်းရဲတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အပြစ်မရှိတဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေကို လူစားထိုး လိုက်တယ်ဆိုပြီး အယုံအကြည် ကင်းမဲ့တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 10/06/2014 09:39:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားသော မြန်မာလူသတ်တရားခံပါဟု အစွတ်စွဲခံရသောဖေ့စ်ဘုတ်မှသတင်း
ဗြိတိန်စုံတွဲ အသက်ခံရမှု၌ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံမြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးဖြစ်သည့် မောင်ဝင်းဇော်ထွန်း (အဖအမည် ဦးထွန်းထွန်းထိုက် အမိ ဒေါ်မေသိန်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ကာပီကျေးရွာ)
မောင်ဇော်လင်း (အဖ ဦးမြအောင်(ကွယ်လွန်)+ အမိ ဒေါ်ဖြူနုချေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မိချောင်ရေသောက် ကျေးရွာ) တို့နှင့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 10/06/2014 09:34:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိုင်းလူသတ်မှု စွပ်စွဲခံရသူ ၂ ဦးကို မြန်မာသံရုံး တွေ့ဆုံ
ထိုင်းနိုင်ငံ ကော့တောင်ကျွန်းမှာ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦးကို သတ်ဖြတ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို မြန်မာအစိုးရ အထူးတာဝန်ပေးထားတဲ့ မြန်မာသံရုံးအရာရှိတွေနဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ အလုပ်သမားရေး လုပ်ဆောင်သူတွေ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တရားခံတွေအဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူတွေရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဥပဒေအရ အကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 10/06/2014 09:30:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Facebook တွင် Sexy မော်ဒယ်လ်များဟု လူသိများသည့် ဇွန်သဉ္ဇာ၊ ဇာဇာထက်နဲ့ ကဗျာကိုကို တို့ ပါဝင်ဖျော်ဖြေသည့် Dance for Life Party ကို ယခုလ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့် ၊ ၈ မိုင်လမ်းဆုံ၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်ဝင်းအတွင်းရှိ VIP Bar တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Dance for Life Party ပွဲမှ ရရှိလာသည့် ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်များကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 10/06/2014 01:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာ့ ကျမ္မာရေးနှင့် -အခြေခံစည်းကမ်း
ဒီဆောင်းပါးလေးရေးခြင်နေတာကြာပါပြီ တိုက်ဆိုင်မှု့ အချိန်အတိုင်းတာမကြုံကြိုက်သေးလို့ ပဲ ပြောရမှာပါ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူနေမှု့ စနစ် အလွှာအတန်းစားအမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ် အထူးသဖြင့်လက်လုက်စား သာမာန်အောက်ခြေ လူနေမှု့ စနစ်အလွှာအတန်းစားအမျိုးထဲမှာ စားဝတ်နေရေးကိုဦးစားပေးစနစ် ရုန်းကန်နေကြသော်လည်း ရှာဖွေရုန်းကန်မှု့ စီးပွားရေးအခက်ခဲတွေကြောင့်ကျမ္မာရေးဆိုသော အန္တရယ်ကြီးက နောက်လိုက်ကြုံနေရတယ်။များသောအားဖြင့် 
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 10/06/2014 12:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့နီးစပ်ရာ မြန်မာတစ်ချို့ တာဝန်မကျေဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်၊
ဆိုရင်းကိုပြောရယင် ကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့ ဟာ မလေးရှားမှာနေစဉ်တုန်းက မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေအတွက် ၊ဘယ်နေ့ ဘယ်ကိုမသွားနဲ့ ။ဘယ်နေရာမှာဖမ်းနေတယ်။ဘယ်မှာအော်ပရာစီဝင်မယ် ဘယ်နေရာမှာ ရိုဟင်ဂျာ အစွန်းရောက်တွေ မြန်မာတွေကို သတ်လိုက်တယ် စသဖြင့် ၊နီးစပ်ရာ ဖုန်းဖြင့် /အွန်လိုင်းမှ /ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များဖြင့်အသီးသီး ကူညီရေးသားသတိပေးကြတယ်၊လုပ်ကြံမည့်သူ မိမိအိမ်နားမှာရှိနေတာတောင်၊မြန်မာတွေ မသိသိရအောင် ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းဖြင့်သတင်းဖြန့် ကြတယ်၊
ကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်စိတ့်စွမ်းဆောင်မှု့လူတိုင်နီးပါးသိကြသလို နောက်ဆုံးအသက်ပါနီးစပ်လာ၍
မလေးရှားတွင်တရားဝင် စီးပွားရှာလုပ်ကိုင်နိုင်သော စာရွက်စာတမ်း အထောက်ထားစုံလင်စွာ ရှိနေရဲ့ သားနှင့် ။မြန်မာပြည်ကိုခွေးပြေး ဝက်ပြေးတပ်ဆုပ်ခဲ့ ရတယ်၊မလေးရှားမှာမြန်မာတွေအသတ်ခံရပေမဲ့အခြင်းခြင်းစည်းလုံးတယ် နိုင်ငံရေးသမား အတိုက်ခံတွေဆိုယင် သံမှုးကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားသည်အထိ ဆန္ဒပြကြတယ်။
အခုထိုင်းမှာ ဖြစ်စဉ်ကြည့် ပါအုန်း
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 10/06/2014 12:51:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိုင်းလူသတ်မှု စွပ်စွဲခံရသူ ၂ ဦးကို မြန်မာသံရုံးေ...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာနှစ်ဦးက တစ်ကယ်လူသတ်တရားခံအ...